Showing ३१-४० of ६५२ items.
अार्यन र साम्राज्ञीकाे लाेभलाग्दाे जाेडी (भिडियाेमा)
साउन १८ गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुन लागिरहेको फिल्म कायरा को दोस्रो गीत पनि आउट गरिएको छ । रिलिजको संघारमा रहेको कायरा टिमले दर्शकहरुको कौतहुल्ता मेटदै दोस्रो गीत यो त माया हो बोलको गीत रिलिज गरेको हो । गीतमा सुगम पोखरेल र गायिका श्रेया सोताङ्गको आवाज ,नरेश भट्टराईको शब्द र कल्याण सिंहको संगीत रहेको छ । जानकारी होस यही गीतको केही भाग हार्ड डिक्सबाट डिलिट भएपछि निर्माण टिमले नेपालम नै केही भागको सुटिङ गरी गीत तयार पारेको हो । फिलिपिन्स र नेपालमा खिचिएको गीतमा आर्यन र साम्राज्ञीको जोडी निकै लोभ लाग्दो देखिएको छ । कायराको ट्रेलरले यतिबेला चौतर्फी चर्चा र प्रशंसा बटुलिरहेको छ । दर्शकको लागि नौलो
प्रकाशित मितिः श्रावण ११, २०७५
‘नाईं नभन्नू ल–५’ मा दमककी सेड्रिना, रूपसँगै अभिनयकाे चर्चा
चलचित्र ‘नाईं नभन्नू ल–५’को फस्ट लुक सार्वजनिक भएको छ । फस्ट लुक पोस्टरमा स्वस्तिमा खड्काले डेब्यु अभिनेता अभिषेक नेपालसँग देख्न सकिन्छ भने अनुभव रेग्मी अर्की डेब्यु कलाकार सेड्रिना शर्मा पनि अटाएका छन् । सेड्रिना शर्मा दमकका ब्यवसायी संगम शर्माकी छोरी हुन् । अनुभव रेग्मीसँग डेब्यु गरेकी कलाकार सेड्रिना शर्माकाे अहिले अभिनयकाे चर्चा चुलिएकाे छ । सधै अनुभवकाे जाेडी हुने कलाकारकाे अभिनयमाथि प्रश्न उठ्दै अाएकाेमा यसपटक भने अनुभव भन्दा राम्राे चर्चा चलेकाे छ सेड्रिना शर्माकाे । फेमली ड्रामा जानरामा बन्दै आएको ‘नाईं नभन्नू ल–५’ भदौ ८ गते रिलिज हुने भएको छ । दिलिप रायमाझी, निरुता सिंह, केक
प्रकाशित मितिः श्रावण १०, २०७५
माैलिकतामा रमाउँदै लिम्बु युवती
पाँचथर । शिरमा शिरफूल, निधारमा शिरबन्दी, नाकमा ढुङ्ग्री र मुन्द्री, कानमा चेप्टेसुन । ढाकाको मेख्लीमाथि गलामा कन्ठा, छातीको एकातिर अल्झिएको सिलामसाक्मा, हातमा बाहीँ र पाउमा कल्ली । यति भएपछि सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ– यी खाट्टी लिम्बुनी युवती हुन् । आधुनिकताको सिको गर्ने नयाँ पुस्ताका युवतीहरुका लागि यी परम्परागत गरगहना र पहिरन झन्झटिलो लाग्नु स्वभाविकै हो । तर लिम्बू बाहुल्य जिल्ला पाँचथरमा भने मौलिक गरगहना र पहिरनमा सजिएर हिँड्ने लिम्बुनी युवती प्रशस्त भेटिन्छन् । जिल्लामा लिम्बूजन्य सङ्घ–संस्थासँगै अन्य जातीय संस्थाहरुले पनि विभिन्न महोत्सव, उत्सव र कार्यक्रमको आयोजना गरिरहन्छन् । ती कार्यक्
प्रकाशित मितिः श्रावण ६, २०७५
८७३ पटक पढिएको
लेटाङ प्रिन्सेसको उपाधि ताज सुजताले पहिरिन
पथरी/लेटाङ नगरपालिका भित्रको ४२ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै लेटाङ प्रिन्सेसको उपाधि सुजता खतिवडाले जितेकी छिन् । फाइनल राउण्डमा तपाईलाई सबैभन्दा बढी खुशी के ले दिन्छ ? भन्ने नायिका सञ्चिता लुइटेलले सोधेको प्रश्नको उत्कृष्ट उत्तर दिँदै खतिवडाले लेटाङ प्रिन्सेसको ताजसहित विभिन्न आकर्षक पुरस्कार जितिन् । लेटाङ–९ की १८ बर्षीया खतिवडा बुधबार राती लेटाङको ग्रीन पिस पार्टी प्यालेसमा भएको फाइनल राउण्डमा उपाधिको ताजपहिरेकी थिइन । उनीले उपाधि सगै निहारिका कलेज बिराटनगरबाट १ लाख ४० हजार बराबरका छात्रवृति र ज्योती लाइफ इन्स्योरेन्सबाट पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन विमा पाइन् । त्यसैगरी उनीले लर्ड बुद्
प्रकाशित मितिः श्रावण ४, २०७५
पथरी । वेभ सिरिज माई बेस्ट फ्रेन्ड सिरिजले अहिले युटुबमा दर्शकहरुको मन जित्दै गएको छ । साकेवा मुभिजको ब्यानरमा ज्योतीराज राई प्रस्तुतकर्ता र रमु श्रेष्ठ राई निर्माता रहेको सो सिरिजले दर्शकहरुको मन जित्न सफल भएको हो । एक नम्बर प्रदेशको झापा जिल्लाका स्थानीय कलाकारहरुको भूमिका रहेको यो सिरिज झापा जिल्लामै स्टन मिडियाले निर्माण गरिरहेको छ । मोफसलमा रहेका स्थानीय प्रतिभाहरुलाई अगाडी ल्याउनको लागी नै यो सिरिजको निर्माण गरेको प्रस्तुतकर्ता ज्योतीराज राईले बताएका छन् । हाल सम्म नौं भाग युटुबमा अपलोड भैसकेको यो सिरिज निर्माण कर्ता राईले हाल यसबाट केही फाईदाको अपेक्षा गरेको छैन, मोफसलमा रहेका भाई बहिन
प्रकाशित मितिः असार २७, २०७५
४१४ पटक पढिएको
पुर्वाञ्चल सिङ्गीङ स्टार सिजन ६ भादौबाट
जिरोपोइन्ट । पूर्वाञ्चल वागिना कला कैन्द्र धरान सुनसरीले आयोजनामा पुर्वाञ्चल सिङ्गीङ स्टार सिजन ६ हुने भएको छ । “युवा प्रतिभा गायन, खोजि हाम्रो अभियान” भन्ने मुल नाराका साथ यस वर्ष पनि भादौ महिनाको अन्तिम साताबाट पुर्वाञ्चल सिङ्गीङ स्टार सिजन ६ का लागी सोलुखुम्बुबाट पहिलो अडिसन सुरू हुने आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको छ । सय वर्षको विजेताले पचास हजार नगद सहित दुई वटा गीत रेकर्ड गर्न र एउटा म्युजिक भिडियो, एक वर्ष निःशुल्क म्युजिक कोर्ष साथमा एउटा गिटार पाउनेछ । दोस्रो हुनेले २५ हजार नगद पुरस्कार सहित एउटा गीत रेकर्ड गर्न, ६ महिना निःशुल्क म्युजिक कोर्ष साथमा एउटा गिटार पाउनेछ । तेस्रो ह
प्रकाशित मितिः असार १२, २०७५
के आर्जनसंगको प्रेममा छिन् केकी ?
नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा बौद्धिक नायिकाको उपाधी पाएकी केकी अधिकारी यस्ती नायिका हुन जो कहिल्यै विवादमा परिनन् भने अन्य नायिकाहरुको जस्तै उनको प्रेमको चर्चा कहिल्यै भएन । आफनो व्यक्तिगत जीवनलाई सार्वजनिकरुपमा खुलाउँन नचाहाने केकी पछिल्लो केही दिन यता भने प्रेमको हल्लाको कारण चर्चामा छिन् । गायक आर्जन पाण्डे र केकीको प्रेमको गसिपले यतिबेला सिने बजार निकै तातेको छ । दुबैले सामाजिक सञ्जालमा एक अर्कासंग भएका तस्बिरहरु पोस्ट गर्दे आईरहेका छन् भने कतिपय कार्यक्रमहरुमा पनि एकसाथ देखिन्छन् । त्यतीमात्र होईन आर्जनको अधिकांश म्युजिक भिडियोहरुमा पनि केकीले नै अभिनय गरेकीछिन् । उनीहरुको बिचको मित्रतामा सब
प्रकाशित मितिः असार ८, २०७५
मिस भइन साक्छी, मिस्टर भए भुपेन्द्र
विराटनगर । मन्जिना मुभिज क्रीएसनको आयोजनामा विराटनगरमा मिस्टर एण्ड मिस टिन पूवाञ्चल २०१८ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगिताको मिस्टर एण्ड मिस टिन फूर्वाञ्चलको उपाधि भूपेन्द्र भट्टराई र साक्छी शाक्यले जितेकी छिन् । प्रतियोगिताको फस्ट रनरअप कविता बुढाथोकी, सौरभ कर्ण घोषित भए भने सेकेण्ड रनरअप समि कार्की, रोमन बस्नेत घोषित भएका छन् । मिस एण्ड मिस्टर ट्यालेन्टको उपाधि अरिफ अक्तर र समिक्षा कार्कीले जितेन । प्रतियोगिताको निर्णायकहरुमा कोरियोग्राफर जयन सुब्बा मानन्धर, नायिका निता ढुङ्गना, ब्युटिसियन शिल्पा निरौला कार्कीलगायत रहेका थिए । प्रतियोगिताको बिचमा कलाकार नीलम ढुङगानाले एक खुट्टाले नृ
प्रकाशित मितिः असार ५, २०७५
सुनसान भयो नमस्ते झरना
धरान/झरनाबाट ढुङगा खसेर इटहरीका विक्रम तामाङको मृत्यु भएपछि पर्यटकिय स्थल नमस्ते झरना गत शनिबारबाट सुनसान भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको सधै घुईचो लाग्ने झरना घटनपनि सुनसान भएको हो । नमस्ते झरनामा रमाउन गएका तामाङको छागाबाट ढुङगा खसेर टाउकोमा लागेको थियो । ढुङगा लागेर गम्भिर घाईते भएका तामाङको उपचारका लागि धरान ल्याउदै गर्दा मुत्यु भएको थियो । अहिले अर्को निर्णय नभए सम्मका लागि नमस्ते झरना प्रबेश गर्न रोक लगाँईएको नमस्ते झरना ब्यबस्थापन समितीका अधक्ष्य दिलिप लिम्बुले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मितिः असार ४, २०७५
१,०७८ पटक पढिएको
नव गायिका इन्दिरा विश्वकर्माको ‘मन्द मुस्कान’ बजारमा
काठमाडौं । को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा शब्द महेश खरेलको रहेको छ भने संगीत खेम थापाको रहेको छ । गीतको म्युजिक भिडियोलाई सलिना म्युजिक प्रालीले बजार ब्यावस्थापन गरेको छ । क्लासिकल र लोक पप म्युजिकलाई फ्युजन गरेर तयार गरिएको गीतको भिडियोमा विमल अधिकारी र शान्ती सुनारको अभिनय रहेको छ । कपिल लामा निर्देशित भिडियोमा राजेश घिमिरको छायाङ्कन रहेको छ भने सम्पादन सुजन शाहीले गरेका हुन ।
प्रकाशित मितिः असार ३, २०७५